Ukhenketho lwefektri - Shijiazhuang Histe Electric Co., Ltd.
Iimveliso eziphambili zenkampani zizinto ezibandayo ezinokuncitshiswa zekhebula, ezenziwa ngerabha enganyangekiyo irabha yesilicon kwaye yaphuhliswa ziingcali zerabha ezaziwayo, iingcali zamachiza kunye neengcali zegridi ngophando kunye nemifuniselo yeminyaka esixhenxe. Intsimbi ebandayo eyonqenqemayo intsimi eTshayina, iphantsi koqikelelo lwelungelo lokuzimela kukarhulumente emva kokuvavanywa yiWuhan High Voltage Research Institute State Grid Corporation yase China, iZiko leSizwe loLawulo loMgangatho kunye noVavanyo lwe-Insulator kunye neSurge Arrester, ngokwemigangatho yesizwe ye-GB11033 , GB5598, JB5892-1991, JB / T8952-199, iimveliso zithathwa njengezifanelekileyo ukuhlangabezana nemigangatho yesizwe kuyo yonke imiba.
Phakathi kwabo bonke abasebenzi abangama-256, abantu abanezidanga zobugqirha okanye isidanga se-bachelor's abaneminyaka eli-17. ”Bambelela kumashishini amatsha; Funa inkqubela phambili ye-techno; Nikezela ngemveliso yodidi lokuqala” ngumgaqo wethu ngalo lonke elixesha.
Inkampani yethu ibisoloko ikwindawo ehamba phambili ekhaya kunye nenkolelo yayo yokuphucula, ukuqinisa amandla obuchwephesha, inkqubo yokujonga umgangatho womgangatho, umgangatho opheleleyo kunye nesatifikethi semfundo, ubuchule bokuvavanya obuphambili kunye nokuvunywa emva kwenkonzo.
Iminyaka eli-10, sinikezele ngezigidi zokufakwa kweentambo kunye nezinye iimveliso zenethiwekhi ezixhasayo kulwakhiwo kunye nohlaziyo lwenethiwekhi yombane yesizwe.Ngowama-2004 inkampani iqhube ngokupheleleyo i-500kV kunye ne-insulators esezantsi yombane, i-35kV kunye ne-voltage esezantsi ye-zinc oxide surgeon arrester, iyazihlukanisa switch, fuse dropout, electric substation busbar tube, shed booster, cable voltage surgeers (box), wall bushing, etc. Oku kwaqonda ukutsibela kwimbali ukusuka kwiimveliso zombane ezisezantsi neziphakathi ukuya kumandla ombane aphezulu, ukusuka kwinto enye ukuya kwenye, ukwenza igalelo elikhulu kukhuseleko lwamandla ombane kushishino lombane, kaloliwe, ishishini leoyile, umgodi wamalahle kunye namanye amashishini amakhulu.Siza kuhlala sinyanzelisa umgaqo-nkqubo wethu ogcina amehlo ethu kwikamva lenkampani kwaye inikezela ngcono yonke inkonzo ejikelezayo.